Heegan oo barbaro deris la noqotay | Somali National Television - sntv.so
Home CIYAARAHA Heegan oo barbaro deris la noqotay
Heegan oo barbaro deris la noqotay
Galabta Kulan xiiso badan ayaa waxaa wada Ciyaaray Kooxaha Heegan iyo Jeenyo, waxaana kulanka uu ka dhacay garoonka Banaadir ee degmada Cabdul Casiis.
Ciyaarta oo ahayd mid xiiso badan ayaa waxaa ay ku soo idlaadatay 1-1 barbaro ah.
Heegan oo barbaraha uu deris la noqotay kulamadii la so dhaafay ayaa waxay barbaro la soo gashay kulankaan kii ka horeyay kooxda Muqdisho City waxaana halkaasi ay ka soo heshay hal dhibic.
Laba kulan oo ay heli lahayd lix dhibcood ayeey heshay laba dhibcood taasi waxaa Ciyaartoyda Kooxda ay ka dhexli karaan nijad jab maadama Horyaalka uu marayo meel gabo gaba ah.
Jeenyo sidoo kale kulankaan kii ka horeyay waxaa guuldaro ay kala soo kulantay kooxda Ciidanka Xooga Horseed waxaana wali baadi goob ay ugu jirtaa in ay gaarto guushii labaad ee Horyaalka Soomaaliya 2019, 13 kulan oo ay Ciyaartay waxaa ay guuleysatay hal kulan oo quraa waana kulankii ugu horeyay oo Horyaalka Soomaaliya ay ciyaartay Xili Ciyareedkan.
Jeenyo iyo Heegan waa laba kooxod oo aad u xifaaltama, kulamada ay ciyaaran ayaa had iyo jeer ah kuwa isku barbar dhaca, Todobadii kulan ee ugu danbeyay oo ay wada ciyareen labadaan kooxod waxaa ay ku kala baxeen natiijo la yaab leh.
Ka hor kulankii lugtii hore ay wada ciyaaren oo 4-1 ay ku adkaatay kooxda Heegan lixdii kulan ee ka horeysay oo ay wada ciyareen labada kooxod waxaa ay ku kala baxeen hal kulan oo ay adkaatay Heegan afar kulan oo ay wada galeen barbaro iyo kulan ay adkaatay kooxda Jeenyo balse 7-dii kulan ee ugu danbeyay oo ay wada ciyareen labada kooxod ayaa waxaa laba jeer adkaatay kooxda Heegan halka mar quraa ay adkaatay Jeenyo afar kulana waxaa ay ku heeshiyeen barbaro.
Kulankaan ayaa ah mid ka mid ah kulamada ugu adag horyaalka soomaaliya todobaadkan waxaana uu dhici doona maalinta berito ah garoonka banaadir.
Todobadii kulan ee ugu danbeyay oo ay wada ciyareen kooxaha Heegan iyo Jeenyo ayaa sidaan u dhacay.
Jeenyo vs Heegan
8-dii KULAN EE UGU DANBEYAY
2 GUUL HEEGAN 5 BARBARO 1 GUUL JEENYO
18/03/19 Jeenyo 1 – 1 Heegan
12/03/19 Jeenyo 0 – 2 Heegan
23/04/18 Heegan 4 – 1 Jeenyo
28/02/18 Jeenyo 1 – 0 Heegan
20/03/17 Elman 0 – 0 Heegan
24/11/16 Jeenyo 1 – 1 Heegan
12/05/16 Heegan 1 – 1 Jeenyo
23/02/16 Jeenyo 2 – 2 Heegan
Previous articleTaariikh nololeedkii Abwaan Maxamuud Cabdullaahi Ciise (Singub)
Next articleAgaasimaha Madaxtooyada Qaranka oo la kulmay Danjireyaal fadhigoodu yahay Muqdisho